HALKAAN KA AQRISO W.W MOGTIMES EE SAAKAY OO AH 2-JUNE-2020
Tuesday June 02, 2020 - 09:43:53 in Wararka by Mogadishu Times
Hay'adaha u xilsaaran dib-u-eegista dast uurka oo ka shiray qorshaha dhameeystir ka dastuurka W/Arrimaha Dastuurka ee XFS Xildhibaan Saalax Axmed Jaamac ayaa Shalay gudoo miyay shir ay ka qeybgaleen dhamaan ma suuliyiinta sar-sare ee W/Ar
Hay'adaha u xilsaaran dib-u-eegista dast uurka oo ka shiray qorshaha dhameeystir ka dastuurka W/Arrimaha Dastuurka ee XFS Xildhibaan Saalax Axmed Jaamac ayaa Shalay gudoo miyay shir ay ka qeybgaleen dhamaan ma suuliyiinta sar-sare ee W/Arri maha Das tuur ka, Gudigga Baa rlamaanka ee La -socodka Dib-u-eegista iyo Hir gelinta Das tuurka iyo Gudigga Madaxaban aan ee Dib-u-eegista iyo Hirgelinta Dastuur ka oo ku qab soomay hannaanka muuqaal-shireedka qad ka intern etka. Kulanka ayaa intii uu soc day looga ar insaday sii ambaq aadidda howl aha ka hars an dhameeytirka dastuurka, waxaa na sidoo kale laga dooday qorshe-howleed ka lagu dhameeystirayo geedi-socodka dib-u-eegis ta dastuurka oo ay horay Wasaarad da iyo 2da Guddi si wadajir ah u diya ariyen. Wasiir Saalax Jaamac oo ugu horeeyn ku lanka furay ayaa ka hadlay howlaha taagan oo ay ugu muhiimsanyihiin arrimaha u baah an in xal-siyaasadeed laga gaaro isaga oo sheegay inay udub-dhexaad u yihiin fulinta qorshe-howledka dhameeystirka dastuur ka. "Sida aad ogtihiin arrimaha masiiriga ah ee u baahan in wadaxaajood-siyaasadeed la ga galo ayaa iminka ah horutabinta ugu muh iimsan ee ka miro dhalin karta geedi-socod ka lagu dhameystirayo dastuurka, inaga ka wasaarad ahaan waxaanu gelinay dedaal ba dan in horay loo dhaqaajiyo arrimahaas ina ga oo wasaaradaha kala duwan ee dowlad da dhexe la yeelanay kulamo-howleedyo si XFS ay aragti mideysan uga yeelato dhame eytirka dastuurka kadibna ay u fududaato in wadaxaajood-siyaasadeed ay ka galaan hog aanka sarre ee dalka" ayuu yiri W/Saalax. Dhanka kale, Gudoomiyaha Gudigga Ba arlamaanka ee La-socodka Dib-u-eegista iyo Hirgelinta Dastuurka Md.Senator Cabdi Xas an Cawaale (Qeybdiid) iyo G/Gudigga Mada xabanaan ee Dib-u-eegista iyo Hirgelinta Da stuurka Prof. Maxamed Daahir Afrax ayaa si wadajir ah waxa ay uga hadleen qaar kamid ah qodobada dastuurka ee u baahan in si de gdeg ah xal-siyaasadeed looga gaaro si loo gu guuleysto fulinta qorshe-howleedka dham eeystirka dastuurka. Gebogabadii, W/Saalax oo kulanka soo xi ray ayaa waxa uu ka dhawaajiyay in la dar dargelin doono arrimaha wacyigelinta dadwe ynaha ee arrimaha dastuurka si dadka Soo maaliyeed ay xog badan uga helaan qodoba da dastuurka ee dib-u-eegista lagu sameey ay islamarkaana aragtiyadooda uga dhiibta an.-----DHAMAAD-----
Xaliimo Yarey oo sheegtay in la diyaari yay tallaabooyinka farsamo ee Hirgelin ta Doorashada Qaranka
Gud.Guddiga Madaxa Bannaan ee Door ashooyinka Qaranka Marwo Xaliimo Ismaa ciil Ibrahim (Xaliimo Yareey) ayaa sheegtay inay guddigu diyaariyeen tallaabooyinka fars amo ee laga sugayay guddiga si loo hirg eli yo doorasahada.Xaliimo Yarey ayaa warkan ka sheegtay kulan ay isugu yimaadeen Guddi hoosaadka Tubta Siyaa sadda loo dhan yahay oo Shalay lagu qabtay Muqdisho wa xaana kulanka lagu falanq eeyay sidii loo ful in lahaa amarkii R/Was aa raha ee ahaa in xu ku umaddu si buuxda u ga shaqayso hirgalin ta dorashada dalka oo xill igeeda lagu qabto.
R/Wasaaraha JFS,Md. Khayre ayaa furay shirka Guddi hoosaadka Tubta Siyaasadda loo dhanyahay, waxaana guddoomiyay R/W/ ku-xigeenka Md.Mahdi M.Guuleed (Khadar).
Kulanka ayaa looga dooday baahida degd egga ah ee loo qabo wada tashi loo dhan ya hay oo ay yeeshaan DFS & dhammaan dowl ad goboleedyada, si loo hirgeliyo doorasho loo dhan yahay oo xilligeeda ku qabsoonta.
Xubnaha guddiga ayaa si wadajir ah hoos ta uga xarriiqa muhiimmadda ay leedahay in la helo heshiis siyaasadeed oo gogosha u xaara in loo gudbo arrimaha farsamo ee doo rashooyinka, kadibna loo soo bandhigo qor sho cad oo waqtiyeeysan.
Wasaradaha Amniga, maaliyadda iyo arri maha gudaha ayaa iyana soo bandhigay qor shaha uga aaddan doorshooyinka.
R/Wasaare kheyrre ayaa Shirkii G/wasiira da Khamiistii la soo dhaafay ka shaaciyay in shaqada ugu muhiimsan ee dowladda hort aalla xiligan ay tahay hiegelinta dorashada.
RW Kheyre oo ka qeb galay shir looga hadlayay hormarinta Maaliyadda dalka
R/Wasaaraha XFS Md. Kheyre ayaa ka qe yb galay shir looga hadlayay arrima ha maaliyadda dalka kaas oo khadaka Internet ka ku qabsoomay. Shirkaan oo ahaa mid todobaadkiiba mar ay qabato wasaaradda maaliyadda ayaa waxaa shir guddoominay ay Wasirka Maaliyadda C/rax maan Ducaale Beyle waxaana si aad ah loo ga dooday hormarinta dhaqaalaha iyo kobc inta kaabayaasha muhiimka u ah.
W/Maaliyadda oo bartiisa Facebook soo dhigay qoraal kooban ayaa sheegay in shar af weyn ay u tahay in R/W Soomaliya Md. Kheyre uu Shalay kala soo qoyb galay shirk aas Todobaadlaha ahaa ee aan uga hadlay Horumarinta Maaliyadda iyo Isbadalka Dhaq aalaha Dalka ee (ECF).
Xisbiga dowlada oo gudbiyay codsigoo da ka mid noqoshada Axsaabta Dalka
Xukuumadda Soomaaliya ayaa Shalay gudbisay shuruudihii looga baahnaa ee dii waan gelinta Xisbiga do wladda, iyadoo laga gud doomay documentyada ka mid noqosha da Axsa abta siyaasadeed ee dalka.
Guddiga Madaxa bannaan ee doorashoo yinka Qaranka ayaa maalmaha soo socda guddoonsiin doona Xisbiga dowladda sha haadada KMG ah ee lagu aqoonsado Xis bul-xaakimka Dowladda.Waxaa xusid mud an,inaanay weli kala caddeyn mowqifka siyaasiga ee wadajirka Madaxweynaha iyo R/Wasaaraha ee doorashada 2021.
Xisbigan cusub oo aan weli si rasmi ah loo shaacin magaciisa balse la saadaalinayo in magaca Nabad iyo Nolol uu qaadanayo ayaa waxaa hore loo sheegay inuu guddoo miye ka noqonayo R/wasaare ku xigeenka dalka Md.Guuleed.Illaa iyo hadda ma cada mowqifka madaxweyne Farmaajo iyo R/Was aare Kheyre ee ka mid noqoshada xisbigan.
Dowladda Soomaaliya oo todobaad kaan fasaxeysa duulimaadyada gudaha
Warar soo baxaya ayaa waxaa ay sheeg ayaan in W/G&Duulista Hawada ee Sooma aliya ayaa dib u bilaabi doonta duullimaadya da maxalliga ah 7aadkan gudihiisa,kuwaas oo horay loogu joojiyay sababo la xiriira Cud urka Coronavirus.
Kulan gaar ah oo ay yeesheen sida la she egay Saraakiisha laanta hay’adda Socdaal ka iyo jinsiyadaha iyo Mas’uuliyiinta Shirka daha Diyaaradaha ayaa waxaa ay isku raac een in lagu dhaqmo amaro la xiriira ka hort agga COVID–19 oo horay loo soo saaray.
Amarada la isku raacay ayaa waxaa ka mid ah in rakaabka iyo shaqaalaha diyaara daha xirtaan qalabka lagu daboosho afka iyo Sanka,gacmo gashiga iyo gacmo-nadiifiyey aasha,si looga hortago Cudurka Coronavirus
DFS ayaa 29-kii Bishii Maarso waxaa ay si KMG ah u joojisay duulimaadyada dalka gudahiisa ah si loo xakameeyo faafitaanka cudurka Coronavirus,xilligaas oo kiisaskii u gu horeeyay ee Coronavirus ah laga helay Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya oo shatigii kala noqotay labo diyaaradood oo si qarsoodi ah Qaad ku keenay Soomaaliya
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay shatigii kala noqotay 2 diyaaraddood oo ka diiwaan gashan dalka Kenya, kuwaas oo lagu eedeeyay inay shixnado Qaad ah gee yeen meelo kamid ah Soomaaliya.
2daan diyaaraddood oo lagu kala magacaa bo Buff AIR SERVICES iyo Silverstone Air Services ayaa lagu eedeeyay inay ku xad gudbeen xayiraadii sa ar nayd duulimaadya da caalamiga ah Cov di19 awgiis.
2daan diyaaradood ay aa ka kala degay Bu uhoodle iyo Jowhar iyagoo DFS u sheegay inay sidaan gargaar Dawo ah, balse markii halkaas gaareen waxay la ogaaday inay sid een shixnad Qaad ah.
Shirkadaha ay katirsan yihiin 2da diyaa raddood weli kama hadlin kala noqoshada shatigii ay kaga howlgalayeen Soomaaliya.
Xildhibaanad Fowsiya "Maxkamadda sare waxaan geynayay dacwad ka dhan ah Sharciga Doorashooyinka dalka..”
Xildhibaan Fawsiya Yuusuf Xaaji Aadan oo katirsan G/Shacabka BFS waxa ay shee gtay in dacwad ay ka gudbiyeen iyada iyo Xisbiyo mucaarad ah Sharciga Doorashooy inka dalka oo ay horay u ansxiyeen labada Gole ee BFS, isla markaana uu Saxiixay Ma daxweynaha Dalka M. C/hi Farmaajo.
Marwo.Fawsiya ayaa she egtay in sharcigaan oo ay u codeeyeen Xildhibaan ada Golaha ay katirsan tahay uu kasoo horj eedo Dastuurka Dalka, laguna deg degay in 2da Gole ee BFS uu ansixiyo, uuna saxiixin Mad axweyne Farmaajo.
"Maxkamadda sare ee Dalka waxaan gey nayay dacwad ka dhan ah Sharciga Doora shooyinka dalka oo uu ansixiyay BFS, markii dambana uu saxiixay Madaxweynaha, waxa aan u aragnaa in uusan sharci ahayn oo uu kahor imaanayo Dastuurka dalka, Xuquuqda Muwaadinka iyo hab qaybsiga beelaha” ay ay tiri Xildhibaan Fawsiya Yuusuf.
Waa ay sii hadashay waxa ayna tiri "Waa mid lagu deg degay oo aan laga sameyn ka fiirsi dheer, waxa uu kasoo horjeedaa Dast uurka cutubkiisa 2aad oo dhan oo xuquuqda aadanaha, siyaasadda, Sinnaanta&tan wada niga kasoo horjeeda, Sharcigaan waa mid isugu jira kan Yurub oo ah Horeeyaa wax hela iyo awood qaybsiga beelaha ee 4.5”.
Xil.Fawsiya ayaa sheegtay in awood qayb siga beelaha oo muddo lagu qaybinayay hay ’adaha kala duwan ee Dowladda uu xaqiray dad badan, sidaas awgeed aan xiligaan mud neen wax lagu sii qaybsado.
Waxaa loo wada dhegtaayaa doorashada dalka ee waqti ahaan ku beegan dhammaad ka sanadkaan 2020-ka ilaa bilawga Horaan ta sanadka soo socda 2021-ka, waxaana ca ddeyn ilaa haatan nuuca Doorasho ee dalka laga hirgelinayo. Guddiga Madaxa bananan ee Doorashooyinka ayaa horay u sheegay in dalka ay ka hirgelinayaan Doorasho Dadwey ne,inkasta oo aan jirin isbadal ay ku dhawaa qeen doorashadaas, balse waxaa shaki la gelinayaa in waqtigaan dalka ka dhici karto Afti dadweyne, iyada oo laga duulayo Duruu faha Amniga,Caafimaadka,dhaqaalaha,khila afaadka siyaasadeed iyo kuwo kale.
Xildhibaanno u badan kuwa haweenka ah ayaa kolkii BFS uu ansixinayay ka hor yimid sharciga Doorashooyinka, inkasta oo cod ah aan ay tiro bateen Mudanayaasha kale, sida asina uu ansax ku noqday, looguna gudbiy ay Madaxweynaha DFS M.C/hi Farmaajo oo Xildhibaannada ku hor saxiixay kolkii uu xirayay kalfadhigii 7-aad ee Baarlamaanka.
Bishaan June, waxaa 2da Gole ee BFS hor tagaya Guddiga Doorashooyinka Madaxa ba nnaan oo la wadaagaya Nuuca Doorasho, haddii uu isbadalay mowqifkoodii codeynta shacabka & shaki bixinta cabsida ku xeeran inay qabsoomi karto Doorasho. Maxkamad da sare ee Dalka xiligaan awood ma u leed ahay inay farageliso sharciga Doorashooyin ka dalka, maadaama aysan jirin Maxkamad dii Dasturiga ahayd ee howshan gali lahayd?
Masuul dhawaan uu magacaabay madax weynaha Puntland oo xilka la wareegay
Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada D/ Puntland Md.Maxamed C/rashiid Cali ayaa Shalay si rasmi ah xilka ugala wareegay Ag aasimihii hore ee Madaxtooyada Md.Maxam ed C/ladiif Yuusuf Ina Abdi ladif, Muna asibadda oo ku dhacdayhab-maqal iyo muu qal ah waxaa ka qeybgalay Agaasime Ku-xigeenka Ma daxtooyada Cabdiweli Timacadde, Af-haye enka Madaxtooyada Jaamac Dabaraani iyo dhammaan Agaasime waaxeedyada Madax tooyada.
Agaasimihii hore ee Madaxtooyada Md.M. C/Iladiif wuxuu ka warbixiyey shaqadii qab soontay intuu xilka hayey iyo qorsheyaasha u yaallay, isagoo kelmad dardaaran iyo mah adcelin ah u jeediyey dhammaan Shaqaala ha Madaxtooyada.
Cabdiweli Timacadde Agaasime ku-xige enka Madaxtooyada oo wakiil ka ah Agaasi mihii hore ee Madaxtooyada Maxamed Ca bdiladiif, ayaa Dukumentiyada iyo agabka ka le ee xafiiska ku wareejiyey Agaasimaha cu sub Maxamed Cabdirashiid Cali.
Dhammaadkii kulanka Agaasimaha Guud ee Madaxtooyada Maxamed Cabdirashiid ay aa hadal kooban jeediyey, wuxuuna uga ma hadceliyey agaasimihii hore shaqada uu soo qabtay, iyo sidoo kale dhammaan shaqaala ha lasoo shaqeeyay.
Muwaadiniin ku xayirnaa dalka Uganda oo lagu soo celiyay Muqdisho
Waxaa gelinkii dambe ee Shalay M/Muq disho lagu soo celiyay Muwaadiniin Soomaal iyeed, oo billihii ugu dambeeyay ku xanibnaa dalka Uganda. Muwaadiniintan oo u badan arday wax ka baraneysay dalka Uganda ay aa waxaa saamayn ku yeeshay kala xir xirn aanta ka dhalatay, markii uu dunidii saamee yay xanuunsida ha COVID-19, uu kee no Coro navirus. Safaar adda So maliya ee M/Ka mpala ku taala ayaa fu dudey say dib u soo celinta muwaadiniinta Sooma aliyeed, ka dib markii ay iska diiwaan geliy een Xarunta Safaaradda.
Muwaadiniinta Soomaaliyeed oo tiradoo du ay gaareyso 84 qof ayaa waxay M/Kamp ala ka soo raaceen diyaarad gaar ahi, taa soo ka soo dejisay Garoonka Aadan Cadde.
Muwaadiniintan qaarkood ayaa waxay ku wa jahan yihiin M/Garoow ee Puntland, halkaa soo ay markii horeba ka yimaadeen. Ka hor in ta aan muwaadiniintan dalka dib loogu soo celin ayaa la hubiyay xaaladooda caaf imaad, iyagoo dhanka kalana Diblomaasiyiinta Safaaradda kaga mahad celiyay fududeynta ah in dib dalkooda loogu soo celiyo. Muwaadiniintan Soomaaliyeed waxaa ay markaan dalkooda ku soo laabte en, iyadoo uu afka u duuban yahay, taa oo qayb ka ah dadaalada lagu xakameyn karo faafitaanka xanuunka COVID-19.
Eedeymo loo jeediyay guddiga xakam aynta Covid 19 ee Somaliland
Afhayeenka Xisbiga Wadani ee Somalil and oo Shalay shir jiraa’iid u qabtay suxufiy iinta ayaa ka hadlay saa meynta xanuunka Corona ee gudaha deegaanada maamulka Somaliland isa ga oo eedey mo u jeediyay gu ddiga loo xilsaaray xakamaynta Cor ona. Ugu horeyn waxa uu ka hadlay go’aamadii ay soo saareen gudd iga ee ay ka mid ahaa yeen in la xiro Masaaji ddada, Isku ulada iyo inaan fagaaraya asha lagu dukan karin faga arayaasha la is kugu yimaado.
Waxa uu sheegay in dhaqaalihii loogu tal agalay xakamaynta xanuunkaan inaysan ad eegsan xukuumadda Somalland welina ay dhibaato caafimaad oo daran ay ka jirto So maliland sida uu hadalka u dhigay. Marka la ga soo tago hadalka Afhayeenka xisbiga mu caaradka ah ee Wadani ayaa waxaa muuqa ta inay sii kordhayaan tirade dadka uu soo ridanayo cudurka Covid 19 ee gudaha Som aliland.
Booliska Kenya oo toogtay Nin ay uga shakiyeen in uu ka tirsan yahay Al-Shabaab
Ciidamo ka tirsan Booliska dalka Kenya ayaa waxaa la sheegay inay toogasho ku dil een Nin ay uga shakiyeen inuu ka tirsan yah ay Al-Shabaab,waxaana lala dilay laba Carr uur ah oo uu dhalay,kuwaas oo la joogay.
Mohamed Mapenzi oo ah Ninka ay dileen Cii damada Booliska Kenya ayaa xilliga la too ganayay waxaa uu ku sugnaa Gurigiisa oo ku yaalla Xaafada Ki bundani ee Deegaan ka Kwale.
Saraakiil Boolis ah ay aa waxaa ay sheeg een in Mohamed Mapenzi uu bam Gacmeed ku weeraray Ciidamada Booliska xilli ay ho wlgal ka wadeen hooygiisa,isla markaana ay isku dayayeen inay Guriga ku jebiyaan.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku daraya an in rasaasta ay Ninkaasi ku fureen ay ku dhaawacmeen saddex Carruur ah iyo Hooya dasha dhashay,kuwaas oo haatan xaaladoo da caafimaad lagu baxnaaninayo mid kamid ah Isbitaalada dalkaas. D/Kenya ayaa wa xaa ay dagaal adag kula jirtaa Xubno ka tirs an Ururka Al-Shabaab oo mararka qaar weerar toos ah iyo qaraxyo ka fuliya Gudaha dalkaas.
Shuruud lagu xiray soo celinta Sooma alida ku xayiran Suudaan
Safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay dalka Suudaan ayaa soo saartay qoraal ay u ga hadlayso sida ay muhiim u tahay in dalka lagu soo celio muwaadiniin ta Somaliyeed ee ku xaniban dal kaas hase’ahaate waxaay hor dhigtay go’aano culus
Qoraalka Safaaradda ayaa waxaa ka muu qday shuruudo adag oo ay ka mid yihiin in la hubiyo caafimaadka qofka lagana baaro xan uunka covid 19 iyo kuwa kale.
Safaaraddu waxa ay tilShalayy in qof ka sta oo buxiya shuruudaha 4-ta ah ee ay so bandhigtay ciddii buuxisay in loo baahanya hay in ay iska soo fiiriso liiska dadka baxaya ee la ogoladay.
Soomaali raashin u qeybineysa mudah araadayaasha Mareykanka
Mudaharaadyada ka socda Mreykanka ee ka dhashay dilka nin madow ah oo ku dhi ntay gacanta booliska ayaa gaaray meelo ba dan,hase yeeshee waxaa lagu soo warrama yaa in saameynta ugu weyn ay soo gaartay M/Minneapol is oo ah halkii ay arrintu ka billa abatay. Gobolka Minnesota, oo ay ka tirsan tahay magaalada Minneapolis waa meesha ay Soomaalida ugu badan ka dag gan yihiin waddanka Mareykanka.
Goobo ganacsi oo ay qaarkood leeyihiin dad Soomaali ah ayaa la boobay. Door noo cee ah ayey Soomaalida ku leeyihiin mudah araadyada rabshadaha wata?
Jaaliyadaha kala duwan ee Mareykanka ayaa ka qeyb qaadanaya mudaharaadyada, waxana ugu badan dadka laga tirada badan yahay bulsho ahaan.Laakiin Soomaalida ay aa hab u gaar ah ugu lug leh dibadbaxyada looga careysan yahay dilka George Floyd.
Rag iyo dumar Soomaali ah oo isbahayst ay ayaa cunto ay guryaha kusoo kariyeen u qeybinaya dadka mudaharaadeyaasha ah ee xuska Mr Floyd ku sameynaya goobtii uu ku dhintay 25-kii bishii May, xilli ay booliska ku hayeen halkaas. Dad Soomaali ah oo ra ashin qado loogu talagalay siinaya mudahar aadeyaasha ku sugan goobtii uu ku dhintay George Floyd ee ku taalla magaalada Minne apolis, Minnesota
Dad Soomaali ah oo raashin qado loogu talagalay siinaya mudaharaadeyaasha ku su gan goobtii uu ku dhintay George Floyd ee ku taalla magaalada Minneapolis, Minnesota
Raashinka ay Soomaalida qeybinayan ayaa ah noocyo kala duwan, waxayna inta badan ku hagaajiyaan xilliga qadada.
Dhanka kale, waxaa jira dad Soomaali ah oo u istaagay inay samaha ka shaqeeyaan waqtigan uu qalalaasaha socdo.
‘Waxaan u imid inaan ka qeyb qaato nadaaf adda’ Qaarkood waxay ka shaqeynayaan nadiifinta qashinka ka dhashay burburka ay mudaharaadeyaasha sameeyeen. Nin Soomaali-Mareykan ah oo ka qeyb qaadana ya nadaafadda Minneapolis
Nin magaciisa kusoo koobay Luqmaan, oo ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ee dal ka Mareykanka ayaa BBC-da u sheegay in uu gurigiisa uga soo tagay si uu gacan uga geysto nadiifinta waddooyinka uu saameyn ta ku sheegay mudaharaadya.
"Waxaan ku koray Minneapolis, oo dug sigeyga sare aan ka dhigtay. Sababta aan Shalay u imid anigoo magaalada geeskee da daggan waa inaan ka qeyb qaato nadaaf adda magaalada laga sameynayo. Dad ka yimid meelo kale oo daris nala ah ayaa ma gaaladii burburiyay, dhibka ugu badanna wuxuu soo gaaray dadkii laga tirada badnaa, oo ay ku jiraan Soomaalida,” ayuu yiri Luqm aan. Sidoo kale dhalinyaro Soomaali ah oo isxilqaamay ayaa kala hagaya gawaarida, ka dib markii ay booliska u suurtagali weyssay inay howshaas qabtaan, rabshadaha socda awgood.
Nin Soomaali ah oo u shaqeynaya sida booliska waddooyinka kala haga Ceydaruus Xasan Aadan ayaa ka mid ah dhalinyarada iskood uga shaqeynaya kala hagidda baab uurta socota waddooyinka M/Minneapolis.
"Sababta aad shaqadaan u galay waa inaan u daneeyo dadka, waayo magaaladan anna ga ayaa daggan, haddii la burburiyo waa ina an annaga hagaajisanno, haddii horumar ay gaarto magaaladuna annaga unbey dan noo gu jirtaa,” ayuu yiri.
25-kii bishii lasoo dhaafay ayaa la shaaciy ay muuqaal laga arkayo Mr Floyd oo dhima na ya xilli uu jilibka qoorta uga hayay askari ca ddaan ah oo ka tirsan booliska M/Minnea polis. Maalintii xigtay ee 26-kii May ayey bill owdeen dibadbaxyo qalalaase isu baddalay oo looga soo horjeeday qaabka ay ciidama da amniga ula dhaqmaan dadka madowga ah. Muuqaalka aadka looga argagaxay ee la ga duubay ninkan 46 sano jirka ahaa ayaa muujinaya wixi dhexmaray booliska Minneap olis iyo George Floyd qabashadiisa ilaa iyo geeridiisa. Dadkii goob joogga ka ahaa dhac dadaas ayaa sheegay in George Floyd uu dukaan lagu magaacbo Cap Foods ka iibs aday sigaar.
Shaqaalihi dukaanka ka shaqeynayey ay aa booliska wacay una sheegay inuu Floyd siiyey 20 doolar oo faalso ah. George Floyd oo ku dhashay Texas ayaa sanada badan ku noolaa Minneapolis. Duqa M/Minneapolis ayaa shaqada booliska ka eryay Derek Cha uvin iyo saddex askari oo kale.
Mr Chauvin, oo ah askariga jilibkiisa qoo rta ka saaray ninka geeriyooday, ayaa markii dambe lagu soo oogay dacwad dil ah.
Imaaraadka Carabta oo ka soo horjees tey qorshaha Nabadda Maraykanka ee Bariga Dhexe
Sarkaal sare oo u dhashay dalka Imaara adka Carabta ayaa Shalay sheegay in talla abo kasta, oo hal dhinac, oo Israel ay ugu darsaneyso qeybo ka mid ah Daanta Galbe ed, ay dib u dhac weyn ku noqon doonto ha naanka nabadda Bariga Dhexe. R/Wasaara ha Israel Benjmain Netanyahu ayaa sheeg ay in golahiisa wasiirada ay 1-da bisha July billaabi doonaan wada-xaajoodyo ku saabs an qorshaha Israel ay madax-banaanideeda ugu dabaqeyso dhul ka mid ah kan Falastiin.
Netanyahu ayaa sheegay in qorshaha naba dda Bariga Dhexe ee uu bishii Janaayo soo jeediyey madaxweyne Trump uu ballan-qaa dayo aqoonsashada deegaanada Yahuudda ee Daanta Galbeed inay yihiin dhul Israel.
Falastiiniyiinta ayaa si aad ah u diiday qo rshaha nabadda Trump, sa babtoo ah waxa uu inta ba dan Israel u sharciyeyna yaa dhul kii ay ku qabsatay dagaalka, oo ay ku jiraan dhammaan deegaanada Yahuudda ee ay dhistay, ta asi oo ah wax Israel ay raadineys ay tobane eyo sano. "Sii socoshada hadalka ku saabs an ku darsashada qeybo ka mid ah dhulka Falastiin waa in la joojiyaa,” ayuu yiri wasiiru dowladaha arrimaha dibedda Imaara adka Carabta Anwar Gargash, oo qoraal soo dhig ay twitter-ka.
Waa markii ugu horreysay oo Imaaraad ka Carabta ay si rasmi ah ugu hadlaan qor shahan. Madaxweynaha Turkey Recep Tayy ip Erdogan ayaa horey ugu eedeeyey qaar ka mid ah dalalka Carabta inay taageeraya an qorshaha madaxweyne Donald Trump, oo uu ku qeexay "Khiyaano Qaran.”
"Qaar ka mid ah dalalka Carabta ee tage eraya qorshaha noocan ah waxay sameynay aan Khiyaano Qaran oo ka dhan ah Qudus, shacabkooda iyo guud ahaan bani’aadannim ada”ayuu Erdogan u sheegay madax gobol eedyada xisbigiisa oo uu kula kulmay An kara. Erdogan oo ah hoggaamiye diinta ku adag, una ololeeya xuquuqda Falastiin, ayaa si gaar ah u magacaabay Sacuudi Carabiya, Imaaradka Carabta,Masar,Baxreyn&Jordan.
Xog: Qorshihii Abiy ee dhex-dhexaadinta Farmaajo iyo Muuse Biixi oo fashilmay
R/wasaaraha Itoobiya, Abiy Axmed ay aa muddooyinkii dambe waday qorshayaal iyo dadaalo uu ku rabay inuu ku dhex-dhe xaadiyo Madaxweynayaa sha Soomaaliya iyo Somali land,kuwaasi oo ugu damb eyntiina ku dambeeyay fa shil,sida uu shaaciyay wargeyska The Rep orter.
Wargeyska The Reporter ee kasoo baxa caasimada dalka Itoobiya ee Addis Ababa, ayaa qoray in dadaaladii Abiy ay fashilmeen, xili ay ka caga jiidayan 2da dhinac inay si to os ah isugu yimadan miiska wada-hadalka.
Wargeyska ayaa xusay in maalmihii u da mbeeyay Madaxda Soomaaliya iyo Somalil and ay hawada isku marinayeen hadalo kul ul,midaasi oo uu ku tilmaamay bilowga fashil ka qorshaha Abiy ee isku soo dhaweynta labada dhinac.
The Reporter ayaa xiisada ka dhex oogan DFS & Somaliland ku macneeyay kuwo god madow kusii ridaya rajada laga lahaa inay wada-hadlaan, taasi oo meesha ka saareysa rabitaanka Itoobiya ee uu hogaaminayo Abiy Axmed. Sidoo kale waxa uu Wargeysku si cad u sheegay in 2da dhi